Fizarana aro vava teny Tanjombato
Fampifitaovana ireo mpivarotra teny amin’ny faritra Tanjombato Mifanerasera amin’ny olona maro ny mpivarotra ao anatin’ny asany. Noraisin-dRamatoa Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana (MICA) ho andraikitra manokana ny … Read More
Fizarana aro tava – MICA.
Ifandrimbonana ny fiarovana ny mpiray tanindrazana. Rehefa mizotra araky ny tokony ho izy ny famokarana ny aro tava dia nidina teny amin’ny tsena ny Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy … Read More
PLAN DE MITIGATION: Fiaraha-mientana matanjaka eo amin’ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina
Hametraka drafitra mazava iatrehana ny vokatry ny Coronavirus eo amin’ny toe-karena malagasy ny Fiadidian’ny Repoblika, ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana, ny Minisiteran’ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola ary … Read More
Tsinjo: 67 Ha, Isotry
Nanatanteraka fanaraha-maso ny MICA raha nahita mpivarotra nampiakatra vidim-bary. Nohamafisina tamin’izy ireo ny tokony hanarahana ny lalana mipetraka : fametrahana ny vidin’entana, fananana faktiora mazava tsara. Nanaiky ny fampidinana izany … Read More
Tsinjo: Fanaraha-maso ny fisian’ny entana sy ny vidin’entana
Mitohy hatrany ny fanaraha-maso ataon’ny MICA mikasika ny fisian’ny entana amidy eny amin’ireo mpanjinjara. Nidina teny Analamahitsy sy Ambohitrarahaba ireo mpanara-mason’ny varotra. Tsikaritra fa ny vary vokarina eto an-toerana dia … Read More
Tsinjo ho an’ny mpiasan’ny orinasa afaka haba
Manakaiky ny mpiasa miatrika fahasahiranana eo amin’ny fiantsenana ny MICA ka nandray andraikitra hitatitra gonim-bary hamidin’ny orinasa mpampiasa amin’ny vidiny mirary dia mirary. Tafiditra anatin’ny hetsika Tsinjo izay mitsinjo ny … Read More